Global Voices teny Malagasy » Fahasahiranana Ara-bola No Nahatonga Ny An-tanàna Kely Iray Ao Makedonia Ho Lasa Mpomba an’i Trump · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2016 8:03 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Avaratra, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Etazonia, Makedonia, Fampandrosoana, Fifidianana, Hevitra, Mediam-bahoaka
“Tremalahy (Boss) Trump, Aody ho an'i Nast” navoakan'ny mpisera Flickr DonkeyHotey tamin'ny 27 Martsa 2016. Nalaina avy amin'ny sariitatra ara-politika iray malaza an'i Thomas Nast mitondra ny lohateny hoe ny “ATIDOHA” ity sarin'ny Boss Trump ity, izay nivoaka voalohany tao amin'ny gazety mivoaka isan-kerinandro Harper tamin'ny 21 Oktobra 1871.
Manana tranonkala maromaro mpomba an'i Trump ireo Makedoniana avy amin'ny tanànakelin'i Veles izay miseho ho tranonkalam-baovao ary efa voatsongodia ho loharanom-baovao sandoka. Tsy nampoizin'ny olona maro ao amin'ny firenena Balkan kely mitoka-monina misy mponina roa tapitrisa ity vaovao ity.
Namoaka ny tantara  ny tranonkala Amerikana Washington Examiner tamin'ny Avrily lasa teo. Nampiseho ny tatitra fa mampiseho anarana sy adiresy ary ny fomba ifandraisana amin'ny tompony monina ao Makedonia ny fandraketan'ny ICANN WHOIS ny tranonkala -izay mampiasa sehatra anarana manintona avokoa izy rehetra- toy ny Usanewsflash.com, 365usanews.com, worldnewspolitics.com . Nanazava ny Washington Examiner fa “natao hampirona ireo mpifidy tsy mbola tapa-kevitra ho amin'ny kandidà ho filoham-pirenena Donald Trump” ireo tranonkala ireo.
Tamin'ny voalohany ny resaka an-tserasera momba ity tatitra ity dia nihodikodina tamin'ny mety ho fifandraisana misy eo amin'ny antokon'ny mpitondra elatra havanana ao an-toerana sy ny mpandala ny mahazatra ao Etazonia. Nanana fifandraisana  izy ireo teo aloha.
Na izany aza, nanambara zavatra hafa tanteraka ny fanadihadiana  nataon'ny tranonkalam-baovao tsy mitady tombombarotra Meta.mk. Nifandray tamin'ireo olona voalaza fa tompon'ny seha-baovao mpomba an'i Trump ny mpanao gazety Meta.mk. Niantsafa tamin'izy ireo ny tompon'ny tranonkala roa. Mpianatra siansan'ny solosaina ny tompon'ny tranonkala iray, ary mpampianatra teny Anglisy ny iray. Nanazava izy ireo fa manohana an'i Trump mba hahazoana vola avy amin'ny alàlan'ny ‘tendry’ atao amin'ny dokambarotra an-tserasera miraikitra ao amin'ny tranonkalan-dry zareo.
Tanàna indostrialy teo aloha i Veles, izay nandia fotoan-tsarotra ara-toekarena. Nifindra nakany an-drenivohitra Skopje ny ankamaroan'ny tanora mpiasa, na nankany amin'ny tanàna hafa any Eoropa Andrefana hitady asa. Voafetra ny fahafahana ara-toekarena tao an-toerana, ary takiana mialoha ny fifandraisana tamin'ny antokon'ny fitondrana raha te hiroborobo.
Nanazava ny iray tamin'ireo tompon'ny tranonkala nohadihadina fa tsy miraharaha momba ny asa fanaovan-gazety izy sy ny fahamarinan'ny votoaty alefany, na ny vokatry ny vaovao tsy marina omena ireo mpifidy Amerikana:
“Nosoratako manokana ny sasany tamin'ireo, nadikako avy amin'ny tranonkala hafa ny sasany. Mamoaka vaovao fotsiny aho fa tsy zavatra hafa. Momba an'i Donald Trump ny ankamaroany zavatra soratako satria toa izay no tadiavin'ny olona ho vakiana betsaka kanefa manoratra ho an'ny hafa ihany koa. aho[…]
Fantatro fa tsy voatery ho marina avokoa ny zava-drehetra miseho eo amin'ny tranonkala, toy ny tranonkala Makedoniana maro. Fa mampiseho ny tranonkalam-baovao niandohan'ny tantara aho isaky ny manoratra “, hoy Mirona Brezev avy ao Veles.
Tsy ela taorian'ny niresahan'ny mpanao gazety Meta.mk tamin'ny tompon'ny tranonkala dia nanamarika tao amin'ny lahatsoratra Examiner sy Meta.mk fa nosoloina mombamomba ireo orinasa mpanafina anarana ny mombamomba ny tompon’ ireo tranonkala .
Fanovana ny mombamomba ny tranonkala mpomba an'i Trump nohadihadian'ny Sampam-baovao Meta.mk .
Naneso ireo filazan'ny governemanta naneho hevitra mikasika ity trangan-javatra ity ny mpisera Twitter @Pipelinemkd:
Mitombo ao Makedonia ny tahan'ny kitika (tendry) an-tranonkala fanjonoana fampitomboana isa ny mpomba an'i Donald Trump. Veles sy Kumanovo no manana ny tahan'ny fitomboana betsaka indrindra amin'izao fotoana izao .
Endriky ny faritra Veles, Makedonia. Sary avy amin'ny mpisera Wikipedia Makedonec, CC BY-SA 3.0.
Nanazava ireo mpisera media sosialy Makedoniana hafa fa misy ny orinasa madinika mifototra amin'ny famoronana tranonkala miompana amin'ny lohahevitra mahaliana ireo mpijery Amerikana. Misy mihitsy aza ny fianarana “Raharaham-barotra an-tserasera sy ny Fanofanana Haivarotra”  ka afaka mianatra hananganana tranonkala WordPress ny olona mahay manoratra teny anglisy ary avy eo hamoaka “vaovao” miompana amin'ny lohahevitra isan-karazany. Afaka manome fidiram-bola ireo dokambarotra araikitra aminy, kanefa toa ireo olona manome fampianarana no mahazo tombontsoa lehibe indrindra amin'ity indostria ity. Manao dokambarotra ao amin'ny media sosialy izy ireo ary toa efa vonona sahady ny mpianatra vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/28/85945/
 Namoaka ny tantara: http://web.archive.org/web/20160407173653/http://www.examiner.com/article/exclusive-pro-trump-propaganda-posing-as-news-sites-originate-from-macedonia
 “Raharaham-barotra an-tserasera sy ny Fanofanana Haivarotra”: https://www.youtube.com/watch?v=-IkG8TA6WuM